ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ ထင်ရှားတဲ့နေရာတွေက? - Chelmo News Portal
Kpop နဲ့ Kdrama တွေက အခုဆို တဟုန်ထိုးပျံ့နှံ့လာပြီး ယဉ်ကျေးမှု ရိုးရာဓလေ့တွေကိုလည်း လူတွေ ပိုစိတ်ဝင်စားလာကြပါတယ်။ အဲ့ထဲမှာမှ သူတို့ရဲ့ ထင်ရှားတဲ့နေရာတွေ ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ကောင်းတဲ့ နေရာတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်
Jeonju Hanok Villageက ကိုရီးယား ရိုးရာအိမ်တွေကြောင့် နာမည်ကြီးတဲ့ နေရာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုရီးယား လူမျိုးတွေနဲ့ touristsတွေ ကြားမှာ ရိုးရာအဆောက်အအုံတွေကြောင့် စိတ်ဝင်စားခံရပြီး ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေ သဘာဝဆန်ဆန် အလှတရားတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေလို့ အပန်းဖြေလို့ကောင်းတဲ့ နေရာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ “Jeongju” က ကိုရီးယားရဲ့ touristsတွေအများဆုံးလာတဲ့ နေရာများထဲမှာ “Jeju” နဲ့ “Busan” ပြီးရင် (No.3) နေရာမှာ ရှိပါတယ်။ “Moonlight Drawn By Clouds” dramaထဲက ဇာတ်ဝင်ခန်းအချို့ကိုလည်း “Gyeonggijeon Shrine” မှာရိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
“Seoul” မြို့ပြီး ဒုတိယ Popular ဖြစ်တဲ့မြို့က “Busan” ဖြစ်ပါတယ်။ “Haeundae beach” က “Busan” ရဲ့ အကြီးဆုံး ကမ်းခြေတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တယ်။ “Gamcheon Cultural Village” ကလည်း “Busan” ရဲ့ ထင်ရှားတဲ့နေရာ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရွာရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ အိမ်တွေကို မတူညီတဲ့ အရောင်တွေနဲ့ ဆေးခြယ်ထားတာပဲ ဖြစ်တယ်။ လမ်းကျဉ်းလေးတွေရယ် အဲ့လမ်းတွေမှာ ရှိတဲ့ လှေကားထစ်လေးတွေက သူ့ရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းရဲ့ဘေးပတ်ပတ်လည် နံရံတွေကို ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ အလှဆင်ထား ကြပါတယ်။ ဓာတ်ပုံရိုက်တာ ဝါသနာပါတဲ့ သူတွေအတွက်တော့ နိဗ္ဗာန်ဘုံလေးဘဲနော်။ “Taejongade” ကတော့ သဘာဝရဲ့အငွေ့အသက်တွေကို ခံစားလို့အကောင်းဆုံး နေရာတစ်ခုဘဲ ဖြစ်တယ်။ ကျောက်ကမ်းပါးဘေး ပတ်ပတ်လည်ကို လမ်းလုပ်ထားပြီး အပေါ်ရောက်တဲ့အခါ “Busan” မြို့ကြီးနဲ့ “Daema” ကျွန်းကို ကြည့်ပြီး သဘာဝအလှကို ခံစားလို့ရတာပေါ့နော်
“Jinhae-Gu” က ချယ်ရီပင်လေးတွေနဲ့ ဝေဆာနေပြီး “Cherry Blossom Festival” က ခရီးသွားတွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်ဆုံး တစ်ခုဘဲဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်တိုင်းကျင်းပတဲ့ ဒီပွဲတော်က ချယ်ရီပင်တွေကြားမှာ ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ အလှဆင်ထားပြီး Street Performance တွေနဲ့ စည်ကားနေတဲ့ နေရာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ညဘက်ဆို မီးအလှဆင်ထားတွေကလည်း ဓာတ်ဖမ်းချင်စရာကောင်းတယ်နော်
” Cherry Blossom Festival” Night View
အားလုံးနဲ့ အရင်းနှီးဆုံး ဖြစ်တဲ့ “Seoul” မြို့ကိုတော့ ချန်ခဲ့လို့ မရပါဘူးနော်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း (၂၀၀၀) ခန့်၊ (18) ဘီစီအီး မှာ “Baekje” ဆိုတဲ့ လူမျိုးနွယ်တစ်စုက စတင်တင်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ Kpop နဲ့ Kdrama တွေ စတင် ပေါက်ဖွားလာတဲ့ နေရာဆိုလည်း မမှားပါဘူးနော်။ (2014) ခုနှစ်မှာ ပြည်ပခရီးသည်များ လာရောက်လည်ပတ်နှုန်းက 10million ကျော်လောက် ရှိပါတယ်။Tourism လုပ်ငန်းမှာလည်း ဝင်ငွေအများဆုံးနဲ့ No.(4) နေရာမှာရှိခဲ့ပါတယ်။ Seoulရဲ့ “Bukchon Hanok Village” က ရိုးရာအိမ်တွေကြောင့် နာမည်ကြီးတဲ့ နေရာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျိုဆွန်းခေတ်ကို ရောက်သွားသလို ခံစားရမှာ ဖြစ်ပြီး “Myoengdong” ကတော့ အလှအပ ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ Paradise ပဲနော်။ Kpopper တွေအတွက်လည်း Album တွေလည်းဝယ်လို့ရပါတယ်။ ကိုယ်က Kpopper တစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ SM Entertainment၊ YG Entertainment စတဲ့ ကိုယ့်Idolတွေရှိတဲ့ Entertainment တွေဆီလည်း သွားသင့်ပါတယ်နော်။ Entertainmentထဲ ဝင်လို့မရလည်း ကံကောင်းရင် ကိုယ့်Idol တွေ Entertainment ထဲဝင်သွားတာ ဒါမှမဟုတ်ထွက်လာတာကို တွေ့နိုင်တယ်နော်
(၂၀၂၀) မှာ ရေပန်းစားမယ့် Hair Color များ
စစ်ပြေးဒုက္ခသည် တစ်ဉီးဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ Girl Generation’s Sunny